Android လုလင်: February 2014
Y320-C00 Service Tool ( 73 , 31 ဖုန်းများ Simcard မဖတ်ခြင်းအတွက် အထူး )
MMPx Team က ကိုရဲလင်းအောင် ( ကျောက်ဆည် ) ရေးသားတဲ့ Y320-C00 Service Tool.apk ဖြစ်ပါတယ်.. Y320-C00 ဖုန်းများတွင် 73 , 31 SimCard မဖတ်ခြင်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...
အတတ်နိုင်ဆုံး Google Play မှာ Vote လေးပေးပြီး ဒေါင်းစေချင်ပါတယ်...
Download => Google Play / Dev host
၀င်ရောက်ဖတ်ရှုပေးကြသော သူငယ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ အခမဲ့ဆိုတဲ့ အရာတိုင်းမှာ ခန့် မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်.... သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ comment တစ်ခုဟာ နောက်ဘလော့အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ ကျွန်တော် လုလင်ပျို နဲ့ ဆက်သွယ်လိုပါက androidlulin@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 6:00 AM6comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Notification တွေကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မယ့် Notification Toggle Premium v2.8.2
သုံးကြည့်ပါ ….. လုံးဝအသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ သိသွားပါလိမ့်မယ်
အသစ်ထွက်ထားတဲ့ ဗားရှင်းသစ်ပါ ……….။
File Size ကတော့ သေးသေးလေးပါ 959KB ပဲရှိပါတယ် ။
CDMA 800 MHz အတွက် Huawei ရဲ့ Model သစ် C8816 ( မြန်မာစာပါပြီး )
ဒီပတ်ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကို Huawei ရဲ့ Model သစ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ C8816 ဝင်ရောက်လာပါတယ်.. Android Version 4.3 ကိုသုံးထားပြီး မြန်မာစာ Built In ပါဝင်လာပါတယ်.. CPU က Quad Core 1.2Ghz ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်ဆန်တဲ့ Speed နဲ့မောင်းနှင်ပေးမှာပါ.. Camera 8 Mp ဖြစ်တဲ့အတွက် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယိုတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ.. Battery 2000 mAh ဖြစ်ပြီး အချိန်အကြာကြီးခံတဲ့ Battery အမျိုးအစားပါ.. ဈေးနှုန်းကလည်း ၁ သိန်း ခွဲ ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် C800 သမားတွေ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။
Model - Huawei C8816
Android Version - 4.3(Jellybean)
CPU - Quadcore 1.2GHz
Emotion UI - 1.6
Huawei C8816 ရဲ့ Original Official Firmware
ဒီပတ်မှ မြန်မာ့ ဖုန်းဈေးကွက်ကိုရောက်လာတဲ့ Huawei C8816 ရဲ့ Original Official Firmware ဖြစ်ပါတယ်.. ဟိုနေ့ကပဲ C8816 ရဲ့ Specification တွေကို တင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်.. CDMA800 သုံး Handset ဖြစ်ပြီး လိုလိုမယ်မယ် ဒေါင်းယူထားသင့်ပါတယ်..
Download : 799.745 MB
ရေးတဲ့အချိန် 12:56 AM 23 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Android User တွေအတွက် Facebook Version အသစ်လေးထွက်လာပါပြီဗျာ။ မနေ့ကမှ (Feb-18) ထွက်လာ တာဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်းမကောင်းလို့ ဒီနေ့မှတင်ပေးဖြစ်သွားတာပါ။ အခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ Version မှာ Feature အသစ်တွေပါဝင်လာပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
** Step-3. " << SKIP >> ".ကိုနှိပ်ပေးပါ။
Recycle Bin ပါလာတဲ့ ES File Explorer V3.0.9.0(Market) apk နောက်ဆုံး ထွက်ဗားရှင်း
Android သမားတိုင်း မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားရမယ့် နောက်ဆုံး Update ပေးထားတဲ့ App လေးပါ ။ ယခင်လုပ်ဆောင်ချက်များအပြင် မှားဖျက်မိတဲ့ဖိုင်တွေကို Restore ပြန်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Recycle Bin ပါလာပါတယ်။ Setting ထဲက Recycle Bin ကို On ပေးထားဖို့တော့လိုပါတယ်။
DOWNLOAD 3.2MB => => BOX LINK
မိမိတစ်ဦးထဲသုံးလို့ရရင်လိုင်းပိုကောင်းလာမယ်မှလား။အခြားသုံးနေတဲ့deviceတွေကိုkillလုပ်လို့ရတဲ့wifi kill apkလေးပါ။updateထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကလဲသေးတဲ့အတွက်အဆင်ပြေမှာပါ။သိပီးသားဖြစ်မယ်ထင်လို့ရှင်းမပြတော့ဘူးနော်။
Download - google.earth7.1.3( 5-11-2013 Update)
All in oneHuawei root
ကိုသူရိန်စိုးရဲ့ All in oneHuawei root ဖြစ်ပါတယ်.. Huawei တွေ အားလုံး Root နိုင်ဖို့ ဒေါင်းယူထားသင့်ပါတယ်.. ကိုသူရိန်စိုးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Download : 80.76 MB
ရေးတဲ့အချိန် 6:00 AM4comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ root ဆော့ဝဲ
Samsung တွေကို apk လေးနဲ့ Update လုပ်လို့ရနိုင်မယ့် Samsung firmware Updates.apk
ကျွန်တော်တော့ မလုပ်ဖူးသေးပါဘူး.. ဒါပေမယ့် ဒီ apk က Google Play မှာ free ပေးတဲ့ Official apk ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီကောင်လေးကို Install လုပ်ပြီး Online ချိတ်ကာ Samsung ဖုန်းတွေကို Firmware Update လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်.. Support ပေးတဲ့ Samsung Model တွေကလည်း တော်တော်များတယ်ဗျ.. Network Unlock/ Sim Unlock လုပ်လို့လည်းရတယ်တဲ့.. သုံးကြည့်ကြပေါ့ဗျာ.. အဆင်ပြေတော့လည်းကောင်းတာပေါ့.. အဆင်မပြေတော့လည်း ကျွန်တော့်ကိုအပြစ်မပြောနဲ့အုံးနှော.. Google Play Link မှာ အရင်ကြည့်ပါ.. အင်တာနက် Connection တော့ ကောင်းမှ ရမယ်ထင်တယ်..
Samsung Updates isanews- and android firmware updates application dedicated to Samsung mobile devices. We keepaclose eye on everything that Samsung does and update it on our application . New firmware is always found here first, just like Kies updates, the best unlock tool, reviews, and much more.
Go to Google Play Link >
Samsung firmware Updates.apk : 3.68 MB
အခမဲ့ဆိုတဲ့ အရာတိုင်းမှာ ခန့် မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်.... သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ comment တစ်ခုဟာ နောက်ဘလော့အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ ကျွန်တော် လုလင်ပျို နဲ့ ဆက်သွယ်လိုပါက androidlulin@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 11:16 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဘာဖုန်းလာလာ v root နဲ့ဖောက်မယ်( root ဖောက်နည်း)
မနက်က Huawei G730 အတွက် Myanmar Font APK တင်ပေးလိုက်တဲ့ ပို့စ်မှာ
shake February 23, 2014 at 6:11 PM
အကို root ကဘယ်​လို​ဖောက်​ရမလဲ ​ပြောပြပါ
ဟုတ်ကဲ့ အမေးရှိတော့လည်း အဖြေရှိတာပေါ့။
အခု ကျနော် လုလင်ပျို ဖုန်းဆိုင်မှာ service သမားလုပ်နေပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ ဘာဖုန်းလာလာ v root 1.7.5 နဲ့ပဲ ကိုင်လိုက်တာပဲ။
အခုထိတော့ လုပ်ဖူးသမျှ v root ကဘာ error မှ မတွေ့သေးပါဘူး။
အဲတော့ အခုပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကို ဘာဖုန်းလာလာ v root နဲ့ဖောက်မယ်လို့နာမည်ပေးလိုက်တာပါ။
မသိသေးသူများကို ပုံနှင့်တကွ ရှင်းပြပေးမှာပါ။
ကဲ root စဖောက်ရအောင် ။
လိုအပ်တဲ့ v root 1.7.5 ကိုအရင်ဒေါင်းလော့ဆွဲပါ။
ကွန်ပြူတာအတွက် v root 1.7.5ကို ဒီနေရာမှာ တင်ထားပေးပြီးသားပါ။ဆွဲလိုက်ပါအုံး။
ဆွဲပြီးရင် v root 1.7.5 ကို ကွန်ပြူတာမှာ install လုပ်ပါ။
အင်စတောပြီးရင် run လိုက်ပါ။
ကွန်ပြူတာက ဖုန်းကိုသိဖို့အတွက် ဖုန်းမှာ setting ထဲဝင်ပြီး unknown source နဲ့ usb debugging ကိုဖွင့်ပေးရပါမယ်။
မော်ဒယ်နိမ့်ဖုန်းတွေမှာတော့ unknown source က setting >>>>application ရဲ့ အပေါ်ဆုံးမှာရှိပါတယ်။usb debuggingကတော့ setting >>>>application ရဲ့အောက်ဆုံးက development ထဲဝင်ရင်တွေ့ပါမယ်။
မော်ဒယ်မြင့် ဖုန်းတွေမှာတော့ unknown source က setting >>>>secturity ရဲ့ အလယ်နားလောက်မှာရှိပါတယ်။usb debuggingကတော့ setting >>>> developer opption ထဲဝင်ရင်တွေ့ပါမယ်။
ကဲ ဒီအထိ ပြောခဲ့တဲ့အဆင့်တွေစုံပြီဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ဖုန်းကို root စဖောက်ပါတော့မယ်။
အိုကေ root ပေါက်သွားပါပြီ။ဖုန်းကသူ့ပါသူ reboot ကျသွားပါမယ်။
ပြန်တက်လာရင် smart zawgyi v 1.5 ကို အင်စတောလုပ်
smart zawgyi v 1.5 ကိုဝင် root ရှိ မရှိ စစ် superuser request တောင်းရင် allow နိုပ်
အပေါ်ဆုံးက huawei ကိုနိုပ် reboot ကျ
smart zawgyi v 1.5က frozen keyboard တစ်ခါတည်းပါပြီးသားပါ။
Huawei G730ကိုတော့ မနက်ကတင်ပေးလိုက်တဲ့
Huawei G730 Myanmar Font APK(100% working)နဲ့ပဲ ဖောင့်ချိန်းပါ။
ကဲ root ဖောက်ပြယုံမက မြန်မာစာထည့်နည်းပါပြောပြလိုက်ပြီနော်။
ရေးတဲ့အချိန် 1:04 AM 13 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Huawei G730 Myanmar Font APK(100% working)
အကို ကျွန်တော်ဖုန်းကို rootအသစ်လုပ်ချင်လိုပါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဖုန်းမော်ဒန်ကG730ပါ နောက်အဲဒီကောင်နဲ့ကိုက်မဲ့ ကီဘုတ်လဲလိုချင်ပါတယ် ကူညီပါ
Huawei G730 အတွက်သီးသန့်ပါ။
ကျနော် အခုဆိုင်မှာ service သမားလုပ်နေတာပါ။
သုံးနေကြလည်းဖြစ် အဆင်လည်းတကယ်ပြေလို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေးကိုသုံးဖို့ ဖုန်းကို root တော့အရင်ဖောက်ရပါမယ်။
root access ရှိမှ သုံးလို့ရမှာပါ။
ကျနော်ကတော့ ဘာဖုန်းလာလာ v root နဲ့ပဲကိုင်ထည့်လိုက်တာပဲ။အေးကော ။
ဆိုင်သမားများ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Tool လေးဆိုရင် မမှားပါဘူး
G730 အတွက် ပြုလုပ်ပေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တခြားဖုန်း မော်ဒယ်
မှာ စမ်းလို့ အဆင်မပြေရင် တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ
ကီးဘုတ်ကတော့ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ သုံးနိုင်ပါတယ် ။
ရေးတဲ့အချိန် 9:23 AM 15 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
simcard မရှိသူများအတွက် simcard မလိုပဲ viber သုံးနည်း
Android လုလင် ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။
Android လုလင် ပရိသတ်များကို ဒီနေ့ အလန်းစားလေးတစ်ခုတင်ပေးမှာကတော့ ခေါင်းစဉ်တင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာ။ဟဲ ဟဲ ။
မယုံမရှိနဲ့နော် ။ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးမှ တကယ်ဟုတ်လို့တင်ပေးတာ။
ANDROID လုလင် ဘလော့ဆိုဒ်ကိုတည်ထောင်ထားတဲ့ ကျနော် အမောင် လုလင်ပျိုမှာ simcard ဆိုတဲ့ ဖုန်းလိုင်းကတ်မရှိပါဘူး။တကယ်ပါ ကျနော် မနောက်တတ်ပါဘူး။
ခုတော့ us ဖုန်းလေးတစ်လုံးရလို့ simcard မရှိပဲနဲ့ သူများဝိုင်ဖိုင်ယူပြီး viber သုံးနေနိုင်ပါပြီ။
ဒီပို့စ် အတွက်လည်း မူလရေးသားနည်းပေးသူ ကိုကျော်ဝင်းထွန်း ကို credit ပေးပါတယ်ဗျာ။
ကျော်ဝင်းထွန်းကတော့ pdf စာအုပ်လေးထုတ်ပြီးတင်ပေးခဲ့တာပါ။
ခုက ကျနော် လုလင်ပျိုက ဒီမှာလည်းပို့စ်အဖြစ်နဲ့ရေးပေးမှာဖြစ်သလို လိုတဲ့အခါဖွင့်ဖတ်ရအောင် pdf ဖိုင်ကိုပါ တစ်ခါတည်း ထုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်။
simcard မရှိသူများအတွက် simcard မလိုပဲ viber သုံးဖို့အတွက်
(၁)us ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရယူဖို့ pinger ဆော့ဝဲလိုပါမယ် ။ ဒီမှာဒေါင်းလာ့ ဆွဲပါ။
(၂)pinger အကောင့်ဖောက်ဖို့အတွက် အင်တာနက် wifi လိုင်းလိုပါမယ်။
(၃)viber သုံးမှာဆိုတော့ viber လိုပါမယ်။
လုလင်ပျို ဖုန်းက sign up လုပ်ပြီးသားမို့ ပုံနဲ့ပြဖို့အဆင်မပြေတာမို့ sign up လုပ်တာကိုပုံမပြတော့ဘူးနော်။
ကျနော် စာနဲ့ပဲ ရှင်းလင်းအောင်ပြောပြလိုက်မယ်နော်။
wellcome to pinger ဆိုတဲ့ page ပေါ်လာရင် အလယ်နားက နိုင်ငံရွေးတဲ့ နေရာမှာ United States ကိုနိုပ်လိုက်ပါ။
နိုင်ငံ list တွေထဲက United Kingdom ကိုရေါးလိုက်ပါ။
ပြီး၇င် Let do this ကိုနိုပ်ပါ။
နောက်တစ် page ရောက်ရင်ညာဘက်ထိပ်ထောင့်နားလေးက creat account ကိုနိုပ်ပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 5:54 PM 10 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Scare Your Friend v5.4 Apk✔
-ဒီ apk လေးကတော့ မိမိရဲ့ ဖုန်းကို တခြားသူ
လာကာ သဲထိပ်ရင်ဖို လန့်သွားစေမယ့်
Scare Your Friend ဆိုတဲ့ Fun အမျိုးအစား
-Apk File Size 1.7MB လောက်ပဲရှိပြီး၊
Android OS Version 2.1 နှင့်အထက်ရှိ
ထားသော ဖုန်းများမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြု
-အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်လင့်ခ်များ ချထားပေး
ပါတယ်။မိမိနှစ်သက်အဆင်ပြေရာ လင့်ခ် တစ်ခုကနေ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။
★One Click လင့်ခ်မှဒေါင်းလုပ်ရယူရန်★
Give your telephone to your friend to play with. After the set time, the horrifying picture with the terrifying sound will startle your friend .
MPT ကထပ်ဆောင်းပေးထားတဲ့ Service ၄ ခုကိုလျှောက်နည်း/ဖြုတ်နည်း
MPT ကထပ်ဆောင်းပေးထားတဲ့ Service ၄ ခုကိုလျှောက်ပြီးမှပြန်ဖြုတ် ချင်တဲ့ သူတွေများ လာလို့၊လျှောက်နည်းကော၊ဖြုတ်နည်းကောတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။လျှောက်နည်းတွေက
Call Waiting ကို Orderdata CW(တစ်လတစ်ထောင်ဘေလ်ထဲကဖြတ်မှာ)၊
Call Forwarding ကို Orderdata CF(တစ်လကိုးထောင်)၊
Voice Mail ကို Orderdata VMS(တစ်လ တစ်ထောင်)၊
Missed Call Alert ကို Orderdata MCA(တစ်လငါးရာ)
Voice Mail ကို Cancel VMS,
Call Forwarding ကို Cancel CF,
Call Waiting ကို Cancel CW,
Missed Call Alert ကို Cancel MCA။
Ph နံပါတ်ကတော့ လျှောက် /ဖြုတ် နှစ်ခုလုံး အတွက် 1331 ဖြစ်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 4:51 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
Zapya v2.1(US version) apk for Android 2MB
zapya 2.1(us)>>>update version
zapya 2.1 ဗားရှင်းထွက်​လို့ မြန်​မာမှုပြုပြီးသား​ကို ဒီ​နေရာမှာ တင်​ထားခဲ့ပြီးပါပြီ။
ဒါ​ပေမယ့်​ အဲဒါက တရုတ်​ကထုတ်​တဲ့ (cn) ဗားရှင်းပါ။
အဲ့တရုတ်​ဗားရှင်း zapya နဲ့ဖိုင်​​တွေ share တဲ့အခါ zapya ရဲ့ setting မှာ storace default location ကို မန်​မိုရီကတ်​ကို​ရွေးထား​ပေမယ့်​လည်း ဘယ်​လိုပဲ setting ချိန်​ချိန်​ internal storace မှာပဲသိမ်း​ပေး​နေတာမို့ internal storace နည်းတဲ့ဖုန်း​တွေမှာအဆင်​မ​ပြေလှဘူး။
အဲဒါကို လုလင်​ပျို အဲဒီပို့စ်​တင်​ပြီးချိန်​မှ​တွေ့ခဲ့ရပါတယ်​။
ကိုယ့်​ဖုန်းတစ်​လုံးပဲဖြစ်​တာလား သူများဖုန်း​တွေ​ရောဖြစ်​တာလား​သေချာရ​အောင်​သူငယ်​ချင်းဖုန်း​တွေယူပြီးစမ်းသပ်​ကြည့်​တယ်​။မြန်​မာမှုပြုလိုက်​သူကပဲ ပြင်​ထားတာလား နဂို​ဆော့ဝဲကဖြစ်​တာလားသိရ​အောင်​မြန်​မာမှု​ကော မူရင်း apk​ကောထည့်ပြီးအမျိုးမျိုးစမ်းသပ်​ကြည့်​ပြီးပါပြီ။
ဘယ်​လိုစမ်းစမ်းအ​ဖြေကဒီအတိုင်းမို့ 2.0 ဗားရှင်းကိုပဲပြန်​ချပြီးသုံးရတာ​ပေါ့။​ဟော ဟို​နေ့ကလုလင်​ပျိုဖုန်းနဲ့အင်​တာနက်​၀င်​​တော့ zapya 2.1 us ဗားရှင်းအသစ်​ထွက်​တာ​တွေ့လို့ဆွဲပြီးသုံးကြည့်​တာ cn ဗားရှင်းလိုမဖြစ်​အသုံးတည့်​တာမို့ Android လုလင်​ ပရိတ်​သတ်​များလည်းအဆင်​​ပြေ​စေရန်​အလို့ငှါ ခု zapya 2.1(us) ဗားရှင်း​လေးကိုတင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ခင်​ဗျာ။
အသုံးပြုလိုသူများ​အောက်​မှာ Download ချပါခင်​ဗျာ။
Box l Dev-Host
Internet Watch Pro for Android for myanmarr country
ဒီAppမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖုန်းဖြင့် အင်တာနက် သုံးသည့်အခါ ကျသင့်မည် ငွေကြေးပမာဏကို တွက်ပေးထားပါတယ်။ GSMကို ၂ကျပ်၊ W/CDMAကို ၄ကျပ်နှုန်းဖြင့် အကြမ်းဖျင်း တွက်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ အသုံးတဲ့မည်ဟု ယူဆ၍သာ ပိုက်ဆံတွက်သည့် functionကို ထည့်သွင်း ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံတွက်ရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ Settingတွင် Calculate Billမှာ အမှန်ခြစ်နှင့် မိမိဖုန်း Network အမျိုးအစားကို ရွေးပေးပါ။ MPTမဟုတ်သည့် တခြားcarrier သုံးသည့်သူများ ပိုက်ဆံတွက်သည့် functionကို မလိုချင်လျှင်လည်း Calculate Billတွင် အမှန်ခြစ် ဖြုတ်ပေးပါ။
Reportကိုလည်း နှစ်မျိုးခွဲပေးထားပြီး သုံးသမျှ မှတ်ထားသော Overall Reportနှင့် တနေ့တာ သုံးခဲ့သမျှကို စုပေါင်းတွက်ပေးသော Daily Reportဆိုပြီး Report နှစ်ခုပါဝင်လာပါတယ်။
Google Play မှ download လုပ်သူများ rating ပေးကြပါခင်ဗျာ။
Viber v4.2.1.1 for Android
Android ဖုန်းတွေအတွက် Viber နောက်ဆုံးထွက် version လေး Viber v4.2.1.1 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ version အသစ်မှာတော့ မသိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေ ၊မကိုင်ချင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကို block တာတွေအပြင် ၊ တစ်ကြိမ်တည်းမှာ ဓာတ်ပုံ ၁၀ ပုံပို့နိုင်တဲ့ feature ၊ Message & Call sounds တွေကိုစိတ်ကြိုက်ထားနိုင်တဲ့ feature တွေနဲ့အခြားသော feature အသစ်များထပ်မံထည့်သွင်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Viber v4.2.1.1 for Android အားအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 10:35 AM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Notification တွေကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မယ့် Not...
Recycle Bin ပါလာတဲ့ ES File Explorer V3.0.9.0(Mark...
Samsung တွေကို apk လေးနဲ့ Update လုပ်လို့ရနိုင်မယ်...
simcard မရှိသူများအတွက် simcard မလိုပဲ viber သုံးန...
MPT ကထပ်ဆောင်းပေးထားတဲ့ Service ၄ ခုကိုလျှောက်နည်း...
Internet Watch Pro for Android for myanmarr countr...
V ROOT ဗားရှင်း 1.7.5 < V-day တွင်ထွက်ရှိလာသော V R...
Shwe-Book English to Chinese / Malaysia / Thailand...
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Talking Ginger
ချစ်သူများနေ့အတွက် အလန်းဇယားလက်ဆောင်လေး - Valentin...
Huawei ဖုန်းမှာ Email မှ Gmail ဖွင့်နည်း
Android firmwareupdate for samsung
CDMA 800,450 ဖုန်းဘေစစ် APK လေးပါ။
ချစ်သူများနေ့အတွက် လက်ဆောင် - Love ကီးဘုတ် Apk
Bagan Keyboard Pro 3.1.8 Crack Version
Samsung Galaxy Note3SM-N900 မှာ Root မဖောက်ပဲ မြ...